Ixoxa ngokwelashwa kokuvikela umlilo kwengilazi yamakhethini engilazi
1. Izici zomlilo wodonga lwengilazi lwengilazi Okokuqala, uma ukwakhiwa kodonga lwamakhethini engilazi kungenangqondo noma kunezinkinga ekwakhiweni komlilo, uma umlilo ususakazeka kalula endaweni evundlile futhi emi mpo ngasikhathi sinye. Ngokuvamile, ingilazi kwesihenqo odongeni iqukethe pa ezimbili ...
Uyawazi umehluko phakathi kwengilazi emnene nengilazi ejwayelekile?
Njengoba isidingo sabantu sempilo siya ngokuya sikhula, ingilazi ethanjisiwe ivela ngesikhathi esifanele, ivela ezingxenyeni ezihlukene zempilo: iminyango yasekhaya kanye namawindi engilazi, ingilazi yemoto nokunye okuningi ukusetshenziswa kwengilazi ethintiwe, ingilazi ethintiwe kanye ingilazi ejwayelekile ikuphi ukwehluka ...
Izinyathelo zokuphepha zokucubungula izingilazi eziqinile
Okokuqala, inqubo yokucubungula ingilazi ethintekile Ukusika - ukuhlenga - ukuhlanza - ukufuthelana - ukwenza homogenizing Amabili, ukucubungula ingilazi ukucubungula inqubo ngayinye yokusebenza ebalulekile. 1.Ukusika ingilazi Umshini wokusika ingilazi A Qala umshini wokusika ingilazi (kufaka phakathi ikhompyutha nephrinta)
Okokuqala, ukuthinta inqubo yokucubungula ingilazi Ukusika - ukuhlela - ukuhlanza - ukufuthelana - ukwenza homogenizing Okubili, ukucubungula ingilazi ukucubungula inqubo ngayinye yokusebenza ebalulekile 1, Ukusika ingilazi 2, Ukusika ingilazi yomshini A Qala ingilazi ukusika imac ...
Luyini udonga lwamakhethini engilazi?
Ngubani owasungula ubuhlakani bezakhiwo zengilazi ezicwebezelayo, zesimanje eziyingxenye yezakhiwo zamadolobha amakhulu? Ukuthanda abantu, empeleni, ngabantu abadala kakhulu. Ifasitela, ekuqaleni elisho ukuthi "umgodi odongeni," ngo-1919 umuntu ofuna ...
Indlela yokufaka yodonga lwengilazi yamakhethini engilazi efihliwe
Eminyakeni yakamuva, ngentuthuko eqhubekayo yokwakhiwa kwamadolobha, izakhiwo eziningi zasemadolobheni zizokwamukela indlela yokwakha yodonga lwamakhetheni engilazi, futhi nomphumela omuhle wokwakha wodonga lwengilazi yamakhethini ubuye wahlonishwa ngumphakathi jikelele. ...
Izinzuzo zengilazi yokuphepha enamamitha
Ukusebenza kokuphepha: ukwakha ingilazi enamathele kungamelana nokungena komthelela wengozi, noma ingilazi icekelwa phansi, imfucumfucu isazoba kanye nefilimu ye-PVB, inciphise ubungozi bokuwa noma ukuwa kwengilazi, ungagwema ukulimala komuntu noma ukulahleka kwempahla ca. ..
Ingilazi ethintiwe yaqhuma. Kwenzeka kanjani lokho?
Ingilazi ethintiwe ayikho amandla aqondile aqondile ngaphansi kwesenzo sokuqhuma okuzenzakalelayo okubizwa ngokuthi ukuqhuma kwengilazi enomoya omnene. Ukuziqothula kungenye yezimpawu zemvelo zengilazi emnene. Kunezizathu eziningi zokuziqhuma, okungafingqwa ngokuthi ...
Ukuhlukaniswa kwengilazi kusondele kakhulu empilweni yethu
Okokuqala, ingilazi yobuciko besimanje kanye nemibono yendabuko yezingilazi nezindlela zokudala zinomehluko oyisisekelo, kukhombisa ukugqama kwale nkathi yempucuko, imiqondo yobuhle, izindlela zemibono, ayinakuqhathaniswa nobuciko bendabuko. ...
Umehluko phakathi kwengilazi emnene nengilazi ejwayelekile
Emsebenzini nasempilweni yethu yansuku zonke, indima yokuhlobisa nokuphepha kwengilazi ikuyo yonke indawo, okuyingilazi emnene nengilazi ejwayelekile. Njengoba ingilazi ibaluleke kangaka, uyitshela kanjani ingilazi ethambile kusuka engilazini ejwayelekile? Empeleni, i-simp ...
Ungalawula kanjani ikhwalithi yokukhiqizwa kwengilazi evikela?
Ngokuqondene nokuthi ungayilawula kanjani ikhwalithi yokukhiqiza ingilazi evikela, imfundiso eyisisekelo yokuvikela ingilazi ohlelweni lwasekhaya ayiphelele kakhulu kulokhu, kepha eminyakeni yamuva nje, ngokuthuthuka okusheshayo kwengilazi yokuvikela eChina, izinhlobo ezahlukahlukene zokuvikela ingilazi ...
Uyazi ukuthi yiziphi izigaba zengilazi ezisezingeni eliphansi?
Ingilazi ye-Low-E ibizwa nangokuthi ingilazi eboshwe ngemisebe ye-LOW, ibhekisa ebusweni bengilazi ekhethekile enesikhala esiphansi kakhulu sendawo yensimbi noma ezinye izinhlanganisela ezakhiwa ungqimba lwamafilimu amaningi. Low-E ingilazi uhlobo oluhlaza, amandla ...